नाङ्गो तारको कारण क्षति | प्रतीक दैनिक - Prateek Daily
घर सम्पादकीय नाङ्गो तारको कारण क्षति
नाङ्गो तारको कारण क्षति
पर्साको जीराभवानी गाउँपालिकास्थित भोलाटाँडीमा हाईटेन्सन लाइनको तार चुँडिएर २२० भोल्टको तारमा सर्ट हुँदा घरघरमा उच्च शक्तिको विद्युत् प्रवाह भयो । त्यति बेला स्विच बोर्ड छुन पुगेका एक महिला र उनको छोरा घाइते भए, संयोगले उनीहरूको ज्यान जोगियो । केही महीना पहिले ठोरी रामनगरमा त्यसैगरी घरघरमा उच्च विद्युत् प्रवाह हुँदा स्विच बोर्ड नै पड्किएर मानिस घाइते भए । अघिल्लो वर्ष वीरगंजको रानीघाट क्षेत्रमा पनि हाईटेन्सन लाइन चुँडिएर ४४० भोल्टको विद्युतीय तारमा सट्दा उपभोक्ताहरूको विद्युतीय उपकरणहरू जलेर नष्ट भएको थियो । उक्त घटनामा १५ वटा घरका पङ्खा, फ्रिज, बल, मोबाइल, टिभीलगायतका सामग्री खराब हुनुका साथै घरको वायरिङसमेत जलेको थियो । त्यसैगरी, वीरगंज मुख्य सडक क्षेत्रमा रूख ढाल्ने क्रममा विद्युतीय तारमा रूख बजरिंदा एक विद्यालयमा आगलागी भएको थियो । यस्ता घटनाहरू हामीकहाँ प्रायः भइरहेका छन् । तर यसलाई स्वाभाविक घटना र नियमित प्रक्रिया जस्तो सम्झिएर सहने उपभोक्तामा बानी परेको छ । मानौं, दैवी प्रकोप हो । प्रकृतिको इच्छामा कसले के गर्न सक्छ र भनेजस्तै गरी विद्युतीय दुर्घटनालाई पनि पीडित पक्षले चित्त बुझाइरहेका छन् ।
अधिकांश विद्युतीय दुर्घटनाहरू नाङ्गो तारको कारण भइरहेका छन् । जहाँ नाङ्गो तार छ, त्यहाँ घटना भएका छन् । हाईटेन्सन लाइन नाङ्गो छ, लो टेन्सनको तार पनि नाङ्गो छ । उक्त दुईमध्ये कुनै एउटा मात्रै तार कुचालक अर्थात् प्लास्टिक पाइपमा ढाकिएको छ भने दुर्घटना हुँदैन । त्यो अवस्थामा एउटा तारको विद्युत् अर्को तारमा प्रवाह हुन सक्दैन । उपभोक्तालाई जतिसक्दो गुणस्तरीय, खतरामुक्त तथा भयरहित, सहज र सुलभ विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी विद्युत् प्राधिकरणको हो । सेवाका कारण कुनै घटना/दुर्घटना भएमा सोको जवाफदेही पनि प्राधिकरण नै हो । उपभोक्ता सचेत नभएको र आप्mनो अधिकारबारे जानकारी नरहेको कारण सेवाप्रदायक पक्ष गैरजिम्मेवार बनेको छ । हाम्रो मुलुकमा नाङ्गो तार आजभन्दा सय वर्ष पुरानो प्रविधि हो । त्यसपछि प्लास्टिक पाइपले ढाकेको तार र त्यसपछि तार भूमिगत गर्नेसम्मको प्रविधि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भिœयाइसकेको छ । त्यसलाई तदारूकताका साथ कार्यान्वयन नगरेको मात्रै हो । काठमाडौं उपत्यकाका केही स्थानमा मात्रै तारलाई भूमिगत गरिएको छ । पर्सा, बाराका कतिपय स्थानमा कुचालकले ढाकेका तार छन् । तर त्यसलाई विस्तार गर्नेतर्फ सोच, योजना, कार्यक्रम भएपनि जाँगर छैन । जाँगर नभए डर वा करले मात्रै काम हुने हो, तर यहाँ त उपभोक्ता नै अचेत छ भने प्राधिकरणलाई के को डर ?
‘वर्तमान युगमा पनि बिजुलीको नाङ्गो तार’, लाजलाग्दो कुरा हो । विकसित मुलुकहरूमा बिजुली, टेलिफोनका तार भूमिगत भइसके । नाङ्गो तारले प्राधिकरणलाई पनि घाटा छ । घरदेखि खेतसम्म नाङ्गो तारबाट नै विद्युत् चुहावट हुने हो । नाङ्गो तारको कारण विद्युत्को कुल आम्दानीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी चुहावट भइरहेको छ । कालान्तरमा नाङ्गो तार विस्थापन गर्नु नै छ भने आज फेरि त्यही नाङ्गो तार विस्तार गर्दा लागत दोब्बर परिरहेको छ । सकिन्छ भने पक्की सडक तथा नालाहरू नबन्दै तार भूमिगतरूपमा बिछ्याउनु उत्तम हो । यसो गर्दा भोलि पक्की संरचना भत्काउन र बनाउन लाग्ने समय र खर्च जोगिन्छ ।
अघिल्लो लेखमा२०७७ असोज ०९ गते शुक्रवारको प्रतीक दैनिक
अर्को लेखमामधेसमा भानुभक्तको लोकप्रियता
कसमाथि भरोसा गर्ने ?
चर्कंदो छ शीतलहर
२०७७ माघ १४ गते बुधवारको प्रतीक दैनिक